Ukuzivocavoca ukuvusa kalula. Lesi setha semisebenzi emine (okubili okungenziwa ngaphandle kokuphuma embhedeni) kuzokusiza ukufudumala uphinde ulayishe amabhethri akho usuku lonke.
Uzizwa kanjani uma uvuka? Umzimba omncane nangemuva? Uma kunjalo, khona-ke kunokuba ube nobunzima ukulungela umsebenzi, kuzodingeka wenze umzimba ukuze uvuse ukulula komzimba. Bayokwenza ngcono ukujikelezwa kwegazi emzimbeni wakho, futhi uzozizwa unamandla futhi unamandla usuku lonke. Yenza njalo le minithi engu-15 ukufudumala njalo, futhi uzobona indlela ukuguquguquka kwakho nokuqina kwakho kuzokuthuthuka, kanye nezinsizwa kanye nobuhlungu be-back.
Pose of butterfly
A. Ulele embhedeni ngakwesobunxele sakho, bhonqa amadolo akho nge-angidi ye-90 degrees. Gudlulela izingalo zakho phambili ngakho-ke ziyi-perpendicular to torso yakho.
B. Thatha umoya ojulile, bese uphumelela bese uhlunga imisipha yomzimba. Ungashintshi i-pose, qala ukuguqa ngakwesokudla. Okokuqala endaweni lapho izingalo nemilenze kuyoqondiswa khona.
C. Gcina ukuhamba kuze kube yilapho izandla zakho nezinyawo zakho zikhona ematithini. Bese uphinda ukunyakaza komunye uhlangothi. Yenza lo msebenzi izikhathi ezingu-10.
Izinzuzo: Ukushisa kwemisipha yangemuva, amahlombe nentamo, kanye nomshini wesisu esiswini.
A. Beka izandla zakho embhedeni, ikhanda kufanele libe sezingeni lentamo, nangemuva - endaweni yokungathathi hlangothi (hhayi ukugoqa nokungahambisani). Isiqalo - emazingeni ehlombe, iminwe ifinyelela phambili.
B. Ukuphefumula bese uphonsa phansi phansi phansi. Sula isisu sakho, welula amahlombe akho bese welula ikhanda lakho edilini. Bheka phambili njengephuphu enhle kakhulu.
C. Ekuphumuleni, phonsa isipele ukuze umgogodla weluleke ophahleni, isikhunta kufanele sibhekiswe kumatress, njengekati elisanda kuvuswa. Phinda ukuhamba izikhathi ezingu-10.
Izinzuzo: Ukushisa kwemisipha yomshoshaba ngemuva nangokwesisu ngesikhathi sokugoba komgogodla. Yenza umzimba ongawuvusa kalula umzimba wakho.
A. Hlala emaphethelweni ombhede, umhlane uqondile, zombili izinyawo phansi ngebanga le-hip (uma unombhede ophezulu kakhulu, yenza lokhu kusebenza ngesihlalo). Beka izandla embhedeni eduze kwezinyathelo, amathiphu eminwe ekhomba phambili.
B. Hlala embhedeni ngezandla zakho bese uhambisa umzimba phansi cishe ngo-3-6 cm. Bendza ama-elbows bese unciphisa umzimba wakho phansi kuze kube yilapho izimbambo zigobile nge-angle yama-degrees angu-90.
C. Lungisa le ndawo ngamasekhondi ambalwa. Bese ubuyela esimweni sokuqala. Yenza lokhu ukunyakaza izikhathi ezingu-10, bese uphumula kancane bese uphinda izikhathi ezingu-10 ngaphezulu.
Izinzuzo: Ukuqinisa imisipha yehlombe, imisindo ye-triceps nesisu somzimba.
Izikwele ngokumelene nodonga
A. Hlala bese uncika emuva emuva odongeni. Imilenze kufanele ibe sebubanzi bezinkalo futhi kude no-50 cm odongeni. Hamba emuva emuva odongeni, ngesikhathi esifanayo uguqe amadolo. Ubonakala uguqa udonga. Kulesi simo, amadolo akufanele adlulise ngaphezu kwezinzwani.
B. Bamba imizuzwana engaba ngu-10, bese ubuyela esimweni sokuqala. Phinda ukuhamba 2 izikhathi eziningi.
Izinzuzo: Ukuqinisa imisipha yezinqandi, emuva okuphansi kanye nezibeletho.
Ukuze uzuze imiphumela emihle, kubalulekile ukufeza lokhu ukushaja kaningi ngangokunokwenzeka. Khona-ke umzimba wakho uzohlale u-toned, futhi isibalo - esimweni esihle kakhulu. Ngempela, akubona bonke abantu abazenza umzimba ekuseni. Abanye abantu abakwenzi nhlobo. Ngakho-ke ungakhohlwa okungenani kusihlwa noma ekuseni (ngokuthanda) ukuyoklabhuza, ufike ebhuloho noma ugibele umshini. Lokhu kuzokusiza ukuthuthukisa isimo jikelele somzimba wonke. Abantu abaningi bakhathazekile ngalesi sibalo, futhi uma uhlala phansi, ukushaja yiyo kuphela insindiso kuwe.
Izinzuzo kanye nokuziqhenya kwe-bodyflex
Ingabe senza i-bikram yoga?
Indlela yokunquma i-cholesterol enhle nokubi
Ukwelashwa kokulala mayelana nokukhulelwa kwentombi
I-Puree kusuka kumalenti
Ingane yakho iya ekilasini lokuqala
Waffles ezithokozela kakhulu ezenziwe ngokwabo
Indlela yokwenza umfana akholelwe ukuthi ungcono kakhulu
Umyeni wami walahlekelwa isifiso sobulili
Izakhiwo zokwelapha uju